ဂျူနီယာဝင်း – သတင်းဖြစ်ပွားမူများ – MoeMaKa Burmese News & Media
(အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်း၊ ဇူလိုင် ၂၀၁၈) မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၈
(James Glen Stovell (ဂျိမ်းစ် ဂလန် စတုိုဗယ်) ရဲ့”Journalism“ (သတင်းစာပညာ) လုို့အမည်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်က အပိုင်းတချူိ့ကုို သင့်လျော်သလုို ဘာသာပြန်တင်ပြထားတာပါ။ သူ့ရဲ့အာဘော်အတုိုင်း ဘာသာပြန်ထားသောလည်း စာရေးသူဖြည့်စွက်ထားတာတွေကို ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ လုပ်ပေးထားပါတယ်။)
(သည်နေရာမှာ သူက သတင်းတွေဖြစ်ပွားမူ တွေကုို တပုိုင်းစီ ရှင်းသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ တစ်ခုခု ဖြစ်တယ် ဆုိုပါတော့တဲ့။ ဒါကုို သတင်းလုို့သတ်မှတ်မယ် မသတ်မှတ်ဘူး။ ဘယ်လုိုအရာမျိူးကုို သတင်းပုံစံဝင်တယ် စသည်ဖြင့်ကုို သူက ရှင်းပြသွားတာပါ။ တခါတရံမှာ လူတွေက အချက်အလက်မှန်သမျှ တင်ပြနုိုင်သမျှကုို သတင်းလုို့ယူဆကြပါတယ်တဲ့။ ဒါကုို သူ့စာအုပ်မှာ ထပ်ခါတလဲလဲ ရေးသွားပါတယ်။ အချက်အလက်တင်ပြတုိုင်း သတင်းမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းများကုို ဂျိမ်းစ် က အခုလို ပြန်ရှင်းပြထားတာပါ။)
သတင်းဖြစ်ခြင်း – အဖြစ်အပျက်တစ်ခု။ အဲသည်ထဲမှာ လူအနည်းငယ် ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်၊ နောက်ဆက်တွဲ အကျိူးဆက်တွေက တဖြေးဖြေး နယ်ချဲု့လာပီ ဆုိုပါတော့။ ဥပမာ လွှတ်တော်ကုိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်က အခွန်တွေ တုိုးကောက်ဖုို့ အဆုိုတင်သွင်းတယ်။ သုတေသနပညာရှင်တစ်ယောက်က ကင်ဆာပျောက်စေတဲ့ ဆေးကုို တွေ့ရှိတယ်။ အဲသည် အဆုိုနှစ်ခု အဖြစ်၂ခုစလုံးဟာ လူတွေ တော်တော်များများနဲ့ သက်ဆုိုင်နေတယ်၊ ပတ်သက်နေတယ်။ အဲသည်အခြေအနေ၂ရပ် စလုံးဟာ တကယ့်ကုို လူကြိုက်များမယ့် အကြောင်းအရာဖြစ်လာတယ်၊ ဒါကုို စဉ်းစားသင့်တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါမယ်။
အချိန် – အကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်တုိုင်းအတွက် ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ဟာသိပ်ကုို အရေးကြီးပါတယ်။ အချိန်သည် တန်ဖုိုးလုို့ ဆုိုရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် အခုကိုဖြစ်လုိုက်တာ ဆုိုတဲ့ အချိန်ဟာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးပေါ့။ အချိန်က သိပ်ကုိုကြာသွားပီဆုိုတာမျိူးဟာ သတင်းလုို့ကုို မစဉ်းစားတော့ဘူး။ ဥပမာ – မနှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့တယ် ဆုိုတဲ့ တရားခွင် ဟာသတင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အခုကို လုပ်နေဆဲ တရားခွင်ကမှ သတင်းဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နုိုင်ပါတယ်။ ဒါဆုိုရင် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာက အဖြစ်တွေကုို သတင်းလုို့မသတ်မှတ် တာလဲ လုို့မေးရင်တော့ အဲသည်အတွက် အဖြေမရှိဘူး။ အဖြစ်အပျက်တုိုင်းအတွက် တထစ်ချ ပြောလုို့မရဘူး။ အဖြစ်အပျက် တော်တော်များများဟာ တစ်ရက် သုို့မဟုတ် ရက်တစ်ဝက်လောက် ကြာသွားပီဆုိုရင် သတင်းလုို့ သိပ်ပြောလို့မရတော့ဘူး။ —-ဒီနေ့သတင်းစာကုို လှန်ကြည့်လုိုက်ပါ။ အကယ်၍ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်က အဖြစ်အပျက်ကုို ရေးထားတာ ဆုိုရင် အဲဒါ သတင်းမဟုတ်ပါဘူး။
ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်စဉ်၊ ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ – ထင်ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက တစ်ခုခု လုပ်တယ်၊ အကြောင်းအရာတွေ များစွာ ပါဝင်ပတ်သက်တယ် ဆုိုရင် အဲဒါတွေကုို သတင်းလုပ်လုို့ရတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန်သမတအကြောင်း ဆုိုရင် ဘာဖြစ်ဖြစ် သတင်းဖြစ်နေတယ်။ သူက ခရီးထွက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့ကုိုယ်ရေးကုိုယ်တာ ကိစ္စတောင်မှ သတင်းလုပ်လုို့ရတယ်။ သူ့ရဲ့လှူပ်ရှားမူတွေ အားလုံးဟာ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ စာမျက်နှာတွေမှာ အသေးစိတ်ကုို ရေးသားပြီး သတင်းရေးလုို့ရတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် သမ္မတ က ထင်ရှားတဲ့သူ၊ အရေးပါတဲ့ သူကိုး။ သူဘာလုပ်လုပ် လူတွေက သိပ်ကို စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ သမ္မတမှ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားထင်ရှားတဲ့သူတွေဟာလည်း သတင်းတွေ ဖြစ်နုိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ရုပ်ရှင်စတားတွေ၊ နံမယ်ကြီး နုိုင်ငံေ၇းသမားတွေ၊ ထင်ရှားတဲ့ ရှေ့နေတုို့ ဘာတုို့အပါအ၀င်ပေါ့။ သူတုို့ဟာလည်း လူသိများတဲ့သူတွေမို့ သူတုို့အကြောင်းတွေဟာ လူတွေဖတ်ချင်စရာ သတင်းတွေ အများကြီး ရေးလို့ရပါတယ်။
အနီးကပ်ဆုံး – ကုိုယ့်အိမ်အနီးအနားမှာ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ တခြားဒေသတွေမှာ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေထက် ပုိုပြီး သတင်းဖြစ်ပါတယ် (လုို့ဆုိုပါတယ်။) ဥပမာ – သင့်အိမ်နားက တောလမ်းလေးတစ်ခုမှာ ကားတစ်စင်းက လူ၂ယောက်ကုို အသေတုိုက်သွားတယ် ဆုိုပါတော့။ ဒါကုို ဒေသဆုိုင်ရာ သတင်းမှာ ဖော်ပြလုိုက်တာဟာ မုိုင်၁၀၀၀ ကျော်အဝေးက ယာဉ်တုိုက်မူတစ်ခုကို ရေးသားတင်ပြတာထက် ပိုပြီး သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆုိုလုိုတာက ကျွန်တော်တုို့ဟာ ကုိုယ့်အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်က အဖြစ်အပျက်တွေကို စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ ကိုယ့်အနီးအပါးက ဖြစ်တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လုိုက်ရရင် လူ့သဘာဝအရ ပုိုပြီး ခံစားမိတယ်၊ အဲသည်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေ အတွက်လည်း ခံစားချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။
သဘောကွဲလွဲမူ – လူတွေက အချင်းချင်း သဘောမတူကြဘူးဆုိုရင် လက်ပါလာတတ်ကြတယ်။ လူတွေက သဘောကွဲလွဲစရာတွေ ရှိလာရင်တော့ အပြန်အလှန် ငြင်းခုန်ကြတယ် ဆုိုရင် အဲဒါကုို သတင်းလုပ်လုို့ရပါတယ်။ ဒါဆုိုရင် လူစိတ်ဝင်စားမူ ပုိုရလာပါတယ်။ သဘောထားကွဲလွဲမူတွေဟာ သတင်းစာဆရာတွေ ရဲ့အကြိုက်ပါပဲ။ အဲသည်အကြောင်းများ ရလုိုက်ရင် လူတွေ စိတ်ဝင်စားလာမှာ အသေအချာပဲကုိုး။ ဥပမာ တရားရုံးမှာ အပြန်အလှန်ပြောကြ ငြင်းခုန်ကြတဲ့ သတင်းမျိူးကုို လူတွေက ကြိုက်ကြပါတယ်။ သူတို့ပါ ၀င်ပါပြီး ဆွေးနွေးလိုလာကြတယ်။
ထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအရာ – ရှားပါးတဲ့ ဖြစ်ပျက်မူတစ်ခုဟာ သတင်းလုို့ တခါတလေ ယူဆပါတယ်။ “ခွေးက လူတစ်ယောက်ကုို ကိုက်လုိုက်တယ် ဆုိုတာဟာ သတင်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူက ခွေးကုို ကိုက်လုိုက်တယ် ဆုိုရင် အဲဒါသတင်းဖြစ်ပါတယ်။“ ဆုိုတဲ့ သတင်းစာပညာမှာ အရေးပါတဲ့ အယူအဆကုို ပြန်ကောက်ကြတာပေါ့။ အဲသည်လုို အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဟာ သိပ်တော့အရေးပါတယ်လ်ုို့တော့ မဟုတ်ပေမယ့်၊ လူတွေ အများကြီးနဲ့ သက်ဆုိုင်သော အဖြစ်မဟုတ်သောလည်းပဲ၊ စာဖတ်သူတွေက စိတ်ဝင်စားနုိုင်တယ်ဆုိုတဲ့အတွက် ပုံနှိတ်ဖော်ပြလုို့ရပါတယ်။ ဥပမာ – လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဒရုိုင်ဘာလုိုင်စင် အသိမ်းခံရတယ်ဆုိုတာက သတင်းမဟုတ်ပေမယ့် အဲသည်လူက ထင်ရှားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေရင် အဲဒါကုို သတင်းလုပ်လုို့ရပါတယ်။ အကယ်၍များ “ဒေသတွင်းမှာ အဆုိုးဝါးဆုံး ဒရုိုင်ဘာတစ်ဦး“ ဆုိုတဲ့ သတင်းခေါင်းစဉ်မှာ သည်လူက ထင်ရှားတဲ့သူမဟုတ်သောလည်း သူက ၂နှစ်အတွင်းမှာ မတော်တဆထိခုိုက်မူ ၂၁ ခုကုို ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆုိုတော့ အဲဒါ သတင်းဖြစ်သွားပါတယ်။
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သတင်းများ – အခုလတ်တလောအဖြစ်တွေဟာ သတင်းတန်ဖိုး ရှိပါတယ်။ ကုိုယ့်အနီးအနားက အဖြစ်တွေဆုိုရင် တခါတလေ သတင်းတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဥပမာ – ကျွန်တော်တုို့ ဒေသတွင်းဆုိုင်ရာမှာ ဆရာဝန်တွေက ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ကြတယ်။ သာမန်အားဖြင့်တော့ ဒေသတွင်း အစည်းအဝေးတုို့ ဘာတုို့ဆုိုတာ သတင်းစာဆရာတွေ စိတ်မ၀င်စားကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာက နောက်ဆုံးပေါ် ကင်ဆာတုိုက်ဖြတ်ရေး ဆေးဝါးကိစ္စဆုိုရင် သတင်းအဖြစ် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ တခါတလေ ဒါကုို သတင်းစာ၊ ရေဒီယို၊ တီဗီတွေကနေ လွှင့်လုို့ရသည်အထိ သတင်းစာဆရာတွေက တင်ပြပေးကြပါတယ်။ အကြောင်းအရာတွေဟာ လက်ရှိဖြစ်ပျက်တာတွေ သတင်းတွေက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေ ဖြစ်မှ လို့ဆုိုသောလည်း တချိူ့သော အကြောင်းအရာတွေဟာ လူထုကြား ရေရှည် ဆွေးနွေးနုိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်လာတာကုို တွေ့ကြရပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ သတင်းကုို စားသုံးသူ ပရိသတ်အတွက် နေ့စဉ်သတင်းများကုို ဘယ်လုိုဖော်ပြရတယ်ဆုိုတာကုို လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစား ကြရပါတယ်။ သတင်းစုဆောင်း၊ သတင်းရေးသား၊ သတင်းတင်ပြ ဆုိုတဲ့ အရည်အချင်းတွေက တော်တော် စကားပြောပါတယ်။ (ရုပ်မြင်သံကြား) သတင်းတင်ပြမူအပိုင်းမှာ အချိန်ကန့်သတ်မူက တော်တော် အရေးပါပါတယ်။ ၂၄နာရီ သတင်းတွေကြေညာပါတယ် ဆုိုတဲ့ ၂၄နာရီ သတင်းအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ နေ့စဉ် နာရီအပြည့်သတင်းတွေ ကြေညာနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ (သည်နေရာမှာ သူက ဘီဘီစီ၊ စီအန်အန်၊ အမ်ဘီစီ အစရှိတဲ့ သတင်းအေဂျင်စီတွေရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်း ကြေညာမှုပုိုင်းကုို ထည့်ပြောထားတာပါ။)
(ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်တဲ့) ဒေသဆုိုင်ရာသတင်းတွေအတွက် ပေးထားတဲ့အချိန်က သိပ်ကုိုနည်းပါတယ်။ တကယ်လည်း ၂၄နာရီလုံးလုံး သတင်းတွေ ကြေငြာနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်အများစုက ကြော်ငြာတွေနဲ့ အခြားပွဲလမ်းကျင်းပတာတွေ ကုို ဦးစားပေး ထုတ်လွှင့်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ…. သတင်းများကုို ကြေညာပါတော့မယ် လဲဆုိုရော … သတင်းကြေညာလုိုက်တာ ခနလေးပါ။ ပြီးတာနဲ့ မုိုးလေ၀သ၊ အားကစား သတင်းတွေက နာရီဝက်လောက် ထုတ်လွှင့်တော့တာပါပဲ။ အများအားဖြင့် သတင်းကြေညာချိန်ဟာ ၇မိနစ် ၈မိနစ်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲသည်ထဲမှာ သတင်းကြေညာတဲ့သူတွေ အချင်းချင်း စကားစမည်ပြောတာ ပါလုိုက်သေးတယ်။
သတင်းစာတုို့ မဂ္ဂဇင်းတုို့ကျတော့ သတင်းတွေအတွက် နေရာကို သတ်မှတ်ပေးထား ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းစာအခေါ်အဝေါ်တစ်ခုကတော့ ‘news hole’ တဲ့။ အဓိပ္ဗါယ်က သတင်းအတွက်ပေးထားသော နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြော်ငြာတွေအတွက် ကော်လံကုို ပေးပြီးသွားရင် သတင်းအတွက် ဖယ်ပေးထားသောနေရာ လုို့လည်းခေါ်ပါတယ်။
အထူးသတင်းတွေ၊ အရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေ၊ ထူးခြား အဖြစ်အပျက်တွေကလွဲရင် သတင်းစာက ထပ်ရောက်လာတဲ့ သတင်းတွေအတွက် စာမျက်နှာတုို့၊ နေရာထပ်ဖြည့်ပေးတာမျိူး မလုပ်နုိုင်ပါဘူး။ (ဆုိုလုိုတာက သိပ်အရေးမကြီးတဲ့ သတင်းတွေဆုိုရင် နေရာဖယ်ပေးရမယ်။) သတင်းအတွက် ပေးထားတဲ့နေရာဟာ သတင်းစာက ကြောငြာတုို့ဘာတုို့အတွက် ရောင်းချလုိုက်တဲ့ စာမျက်နှာပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ သည်တော့ သတင်းစာ တော်တော်များများဟာ ၅၀% သတင်း အတွက်ပေးကာ ကျန်တဲ့ ၅၀% က ကြော်ငြာ ဖြစ်လာပါတယ်။ (အချိူးအားဖြင့် ၅၀:၅၀) ဒါပေမယ့် တချိူ့သတင်းစာတွေကျတော့ အချိူးက ၄၀: ၆၀ (သတင်းအတွက် ၄၀%၊ ကြော်ငြာက ၆၀%)။ တချိူ့ကျ ၃၀:၇၀ (သတင်းအတွက် ၃၀%၊ ကြော်ငြာက ၇၀%) တောင်ဖြစ်နေပါတယ်။
ဟော …. Web သတင်းတွေကျတော့ (၀က်ဆုိုက် အင်တာနက်သတင်းတွေ) အချိန်နဲ့ နေရာက အတုိုင်းအဆမရှိ ဆွဲဆန့်ချင်သလောက် ဆွဲဆန့် ရှည်ချင်တုိုင်းရှည် နေတော့တာပါပဲ။ ၀က်ဆုိုက်သတင်းတွေမှာ အချိန်က သိပ်စကားမပြောတော့ဘူး။ ပေးတဲ့ နေရာကလည်း လွတ်လပ်စွာ ပေးချင်တုိုင်းပေး လို့ရနေပါတယ်။ သည်တော့ သတင်းတွေကုို အချက်အလက်များများနဲ့ တင်ပြချင်တယ်ဆုိုရင် ၀က်ဆိုက်တွေမှာ က သတင်းစာတုို့၊ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းအေဂျင်စီ တုို့ထက်ပုိုသာတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရတယ်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် ၀က်ဆုိုက်တွေမှာလည်း ကန့်သတ်ချက် ကရှိနေပြန်တယ်။ အဲဒါကတော့ ခန့်အပ်ထားတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေပါ။ ဒီလို သတင်းအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ စီးပွားရေးအရ ၀န်ထမ်းတွေ ပမာဏတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး ခန့်ထားရပါတယ်။ အဲသည်ဝန်ထမ်းတွေက သတင်းစုဆောင်း၊ ရေးသား၊ တည်းဖြတ်စသဖြင့် ရလာတဲ့ အချက်အလက်တွေကုို နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။ သတင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် လတ်ဆတ်တဲ့သတင်းတွေ နေ့စဉ်ရရှိဖို့၊ တင်ပြဖုို့ အလုပ်လုပ်ကြရမှာ ဘယ်တော့မှ ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအရေအတွက်နဲ့ မလောက်ပါဘူး။ ဒါဟာ ဘယ်သတင်းဌာနမဆုို ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဆုိုက်သတင်းမီဒီယာတွေအတွက် စီးပွားရေးအရ ၀န်ထမ်းခန့်အပ်မူကိစ္စဟာ သတင်းစာ၊ သတင်းအေဂျင်စီတွေ၊ တီဗီသတင်းအေဂျင်စီတွေထက် ပုိုပြီး ရင်ဆုိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလုိုက်ရပါတယ်။
← “Memories of 1991” Art Exhibition – Gallery 65မှာ ၅ရက်ကြာ ပြမယ်
နိုင်ငံ ၈နိုင်ငံမှ ပန်းချီဆရာများ ပြသတဲ့Kumudra waves အမည်ရတဲ့ ပန်းချီပြပွဲ →
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ အတွေးအမြင် ငြိမ်းချမ်းအေး
November 22, 2016 Aung Htet